Garyaqaan & Odhaahdiisa Xigmadaysan muxuu maanta yidhi.
Nov 15, 2012 (QOL) Maasha Allaah: Alleylehe, waa guul weyn mar hadii Kismaanyo dadkii lahaa ay gacantooda ku jirto oo ay maanta ka arinsanayaan sidii ay masiirkooda u maamulilahaayeena, una isticmalaan khayraadkiisa, una sameeyaan maamul ay u dhanyihiin dhamaan dadka meesha wada daga ayaga oo raacaya nidaamka u yaala dawladda Soomaaliyeed kaas oo dhigaya sadexdii Gobal in ay Maamul Goboleed samaysan karaan waa farxad weyn oo u soo hoyotay dhamaan bulshada Soomaaliyeed meel ay jogaanba.
Waxaad ka hadashay arin aad u farxad badan miyaad iloowday Madaxweynaha Soomaaliya in uu arintaas diidan yahay isaga oo aad uga xun in Kismaanyo la xoreeyo, dadkii lahaana gacantooda soo gasho. Miyaad wali maqashay Madaxweynaha oo u hambalyaynayaa guusha ay gaadheen dadkii Kismaanyo lahaa oo Xoreeyay, Miyaad wali maqashay maamulkiina dhista sida Hiiraan lagu yidhi, Uganda waxay ka xoraysay Muqdisho Al-shabab Kenyana waxay ka xoraysay Kismanyo iswaydii maxay ku kala duwan yihiin labada magaalo & labada ciidan maamul usamaynta gobalada Jubooyinka & Gedo ma waxaa goáankoodu ka goáa Muqdisho mise dadka gobaladaas dagan.
Ma is waydiisay maxay arinta Kismanyo uga hadlaysaa Jabuuti, maxase Muqdisho uga naxday xoraynta Kismanyo ujeedadu waxaa weeye anaa u soo socday oo rabay inan Uganda ku qabsado ee maxaad idinku hortay u xorayseen sabab too ah anigu Uganda ayaan wataa oon saaxiib la ahay laakiin Kenya adaa wato sidaas darteed waa cadow mana rabo inay wadanka jookto inaysidaas tahayna ogoow Uganda shala markuu watay Cabdullahi Yusuf waxay ahayd cadaw soo duulay maantana waa nabad ilaaliyaal sharaf leh.